That's so good, right?: Dating Diaries (or) First Impressions
Dating Diaries (or) First Impressions
အိုကေ…..ဘော်ဒါတွေနဲ့ share သင့်တယ်လို့ခံစားရတာကြောင့် ကျနော့်အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တော့မယ်။ ကျနော် ဒီည ဘဲတစ်ပွေ နဲ့ ချိန်းထားတယ်။ ဒါ သူနဲ့ကျနော် ပထမဆုံးအကြိမ် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပြီး အရင်က ကျနော်တို့လုံးဝမတွေ့ဘူးပါဘူး။ သူက တကယ့်ကို ရည်ရည်မွန်မွန်နဲ့ ချစ်စရာရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်လေးပါပဲ။ သူ့အသက်က ၁၉နှစ်ဆိုတော့ ကျနော်နဲ့အသက်အတူတူလောက်ပဲပေါ့။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်က ဂေးတွေအကြားပေါ်ပြူလာအလွန်ဖြစ်တဲ့ Dating Website တစ်ခုမှာဆုံတွေ့ကြတာ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လောက်ပဲရှိပါ သေးတယ်။ သိတော့သိပါတယ် တွေ့မြင်ရတာသိပ်မကြာသေး သူ့အကြောင်းလဲသိပ်မသိသေးဘဲနဲ့ ချိန်းဆိုမှုမလုပ်သင့်သေးဘူးဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ သူက သူနဲ့အတူ ညစာအတူထွက်စားရအောင် လိုက်မယ်မဟုတ်လားလို့ တောင်းဆိုလာတာကြောင့် ငြင်းဖို့ခက်သွားတာဗျာ့။
ကျနော်တို့တွေ ပြောထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ ချိန်းထားတဲ့အတိုင်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေ့ဆုံဖြစ်ကြပါတယ်။ လူသိပ်မများသော စားသောက်ဆိုင်လေးမှာ ကျနော်တို့တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ကြစကားပြောကြနဲ့ပေါ့။ ကျနော်ဆိုလိုတာကဗျာ ကမောက်ကမဖြစ်ရပ် သို့မဟုတ် တစ်ခုခုဖြစ်တာမျိုး မဖြစ်ကြဘူးဆိုပါတော့။ ကျနော့်အထင် ဂေးတွေအချင်းချင်း အထာသိနေသလို စိတ်သဘောထားချင်း သိပ်မညှိရတာလည်းပါမယ်။ သူက သိပ်ကို ဟာသဥာဏ်ရွှင်သူ၊ စမတ်လည်းကျ၊ ပြီးတော့ တကယ့်ကိုကြည့် ကောင်းလွန်းသူလေးပဲ။ အကုန်ခြုံငုံပြောရရင် ချိုမြိန်စဖွယ်အပြစ်ကင်းသော Sweetie Pie လေးပေါ့။ ကျနော်တော့ သူ့ဆွဲဆောင်မှု အောက်မှ တကယ်ကျဆုံးသွားပြီ။ အို…သူ့နာမည်ကလေးက ဘိုဘိုတဲ့ဗျ။ အင်းလေ ကျနော့်စိတ်ထဲခံစားရတဲ့အတိုင်းပြောပြတာ အထင်တော့မသေးဘူးမဟုတ်လား။ ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့တွေမြို့ထဲက အီတာလျံစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ချိန်းတွေ့ကြပြီး စကားစမြည်ပြောဖြစ်ကြတာ အချိန် အတော်ကြာကြာ လေပေးဖြောင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစားအသောက်တွေက အံ့မခမ်းဘဲ စားကောင်း လိုက်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေကအရေးမပါဘူး ဆိုရမယ် ကျနော်တို့တွေ တကယ့်ပြည့်စုံတဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာပဲလေ။ ကျနော်တို့တွေ အစားအစာလေးတွေ စားလိုက် စကားစမြည်လေးပြောလိုက်နဲ့ စားပွဲတစ်ခုလုံးပြောင်သွားပေမဲ့ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း သေချာမသိကြသေးတာသေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်သား အပြင်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း စကားလက်ဆုံ ထပ်ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်။ ဘယ်သွားကြ ဘာတွေပြောကြမလဲ မဆုံးဖြတ်ရသေးတာကြောင့် သစ်သီးဖျော်ရည် တစ်ယောက်တစ်ခွက်ထပ်မှာကြပြီး ခဏတော့ ဆက်ထိုင်ဖြစ်ကြပါ သေးတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘိုးလင်းသွားပစ်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါရော။ ဒီစားသောက်ဆိုင်ရှိတဲ့ လမ်းသွယ်လေးရဲ့ထိပ်မနီးမဝေးမှာ ဘိုးလင်းရုံတစ်ရုံရှိတယ် လမ်းလျှောက်သွားရင် လည်းအဆင်ပြေတော့ နှစ်ယောက်သား သဘောတူစွာသွားလိုက်တယ်။
တကယ်တန်းဆိုရင် ဘိုးလင်းပစ်ရတာ ကျနော် တော်တော်မုန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့အချိန်အတူဖြုန်းရတာဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး စိတ်ပါလက်ပါ ကစားမိပါတယ်။ တစ်ခုပြောစရာရှိတယ် ဘိုးလင်းပစ်ရင် လက်ကလေးလွှဲအဲ…ကိုယ်ဟန်ကလေးခပ်ပါပါမှာ ဒူးကိုနှိမ့်နှိမ့်ပြီးပစ်လိုက်တဲ့ အခါတိုင်း ကျနော် သူ့တင်ပါးတွေကိုမကြည့်ဘဲမနေနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်ပြန်ပြီး ပြောရလောက်အောင်ပါ အဲ့ဒီလူရဲ့တင်ပါးတွေက စွဲဆောင်မှု ရှိလှပါတယ်။ ရိုးရိုးပြောရရင်ဗျာ သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကလည်း အကြပ်၊ပြီးတော့ သူ့တင်ပါးတွေကလည်း ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်းနေတာ များ ဂလုကနဲတံတွေးမျိုချမိတဲ့အထိ။ သူ ဘိုးလင်းပစ်ပြီး ကျနော်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာလာထိုင်ပြန်တော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနွေးဓာတ်ရယ် လတ်ဆတ်တဲ့မွှေးရနံ့ရယ် ရမိရသလို အပြုံးလေးတွေလဲပေးသေးတယ်ဗျ။ ဒီလို ဒီလိုလေးတွေက တစ်ဖက်သားစိတ်ထဲမှာ အမှတ်ကောင်း တွေပေးချင်စိတ်ဖြစ်မိစေသလားပဲနော်။ အာ…သူ့ကိုအာရုံစိုက်မိနေတာနဲ့ လတ်တလောကစားနေတဲ့ ကစားပွဲကို အလွယ်တကူ အနိုင်ယူ သွားပြီ။ ဘိုးလင်းကစားပွဲကော ကျနော့်ရင်ထဲက ကစားပွဲလေးကိုရော ….အာ..။
သူ့ကြည့်ရတာ ကျတော့်ကို သဘောကျပုံရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျတော်တို့တွေဘိုးလင်းပစ်ပြီးပြီဆိုရင် လမ်းမခွဲကြသေး ဘဲ သူ့နေရာကိုလိုက်ပြီး တစ်ခုခုသောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နေရာဆိုတာက လောလောဆယ် မိဘတွေနေအိမ်က အခန်းကိုဆိုလိုပြီးတော့ သူတစ်ယောက်တည်းနေတဲ့ အခန်းက နည်းနည်းလှမ်းလို့ဆိုပဲဗျ။ ကျနော် ပထမတော့ ချီတုံချတုံ ဖြစ်မိပါရဲ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုမှတွေ့တဲ့လူ အခုမှစချိန်းတွေ့တဲ့လူဖြစ်နေလို့ပါ။ အခုမှစတာ ခြေလှမ်းကျော်လှမ်းသလို သို့မဟုတ် ပိုလုပ်မိတဲ့ လူတစ်ယောက်လို ဟန်ချက်ပျက်မှာကြောက်တယ်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လောက် အွန်လိုင်းမှာ စကားစမြည် ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတာမှန်ပေမဲ့ ဒီလောက် ခပ်မြန်မြန် နှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာတာကတော့ ကျနော့်အတွက် အထူးအဆန်း လုပ်ရပ်ပါပဲ။ အလောသုံးဆယ် အရေးတကြီး အစီအစဉ်သိပ်မကျ လုပ်တဲ့အရာတွေဆိုရင် ကျနော်က ငြင်းဆန်စကားဆိုချင်ခဲ့တာ အမြဲလိုလိုဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ကျနော်တို့တွေလေပေးလည်းဖြောင့်နေသလို တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံနေပြီး ခပ်စောစော လမ်းခွဲကာ အိမ်ပြန်ကြရမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ ရှက်စရာကောင်းမလား တွေးမိတာကြောင့် သူနဲ့အတူပြန်ကြဖို့ ကျနော် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဘိုးလင်းရုံ ကန်တင်းက ဖျော်ရည်တစ်ခွက်လောက် ကျနော်တို့တွေ ထိုင်သောက်ကြ တစ်ယောက်အကဲ တစ်ယောက်စမ်းကြနဲ့ ခဏတော့ ထိုင်ဖြစ်ကြသေးတယ်။ နောက်တော့ အခြားသောက်စရာတစ်ခုခုကိုသောက်ဖို့ mood ၀င်လာကြတာနဲ့ အမြန်ရစားစရာနှစ်ယောက်စာကို take_away ယူလိုက်ကြပြီး သူဦးဆောင်ရာနောက်ကို ကျနော်လိုက်ဖြစ် ပါရော။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သား သူ့အခန်းလည်းပြန်ရောက်ရော ဧည့်ခန်းထဲကဆိုဖာပေါ်မှာ အတန်ကြာထိုင်ပြီး စကားစမြည်ဆက်ပြော ဖြစ်ကြပါ တယ်။ အဆန်းဆုံးအတွေ့အကြုံပါပဲ။ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံဖူးတယ်ဆိုသမျှအတွေ့အကြုံ တွေထဲမှာ ဘိုဘိုနဲ့ ကျနော့်လို အတိုင်အဖောက်ညီတဲ့လူ အဲ…ရုတ်တရက်လိုပဲ စိတ်ချင်းအဆက်အသွယ် ရှိသလိုလိုခံစားရတဲ့အထိ တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးဘူး။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် စကားပြောဆိုနေကြစဉ်မှာ သောက်စရာ (အဲ အရက်သောက်ဖြစ်ကြတယ်လို့ ၀န်ခံပါတယ်) လေးနည်းနည်းတော့ မော့ဖြစ်ကြသေးတယ်။ ကျနော် ခေါင်းထဲ ရီဝေေ၀စတင်ခံစားရစအချိန်ရောက်လာတော့ ကျနော် ညလည်းနက်ပြီ အိမ်ပြန်ပြီးနည်းနည်း လောက်အိပ်လိုက်မှ မနက်ဖြန်ကြရင် သူ့ကိုလာခေါ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း ဘိုဘိုကိုပြောလိုက် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘိုဘိုက စကားပြောလို့ ကောင်းတုန်း သောက်လို့ကောင်းတုန်းရှိသေးတယ် မပြန်စေချင်သေးဘူးတဲ့လေ။ ကျနော်လည်း မပြန်သေးဘူး တကယ်မပြန်သေးပါဘူးလို့ ကတိ ထပ်ကာ ထပ်ကာပေးမိရင်း နောက်တစ်ခွက်မော့ဖြစ်ရပါတယ်။ ကျနော် ဒီထက်ပိုမမူးခင် ဒီထက်ပိုရူးနှမ်းတာတွေ မလုပ်မိသေးခင် ပြန်သင့်မှန်းကျနော်သိပါရဲ့။ နည်းနည်းလေးမော့လိုက် ကျနော်တို့ အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတွေ ဂီတတွေအကြောင်း နောက်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်း ပြောလိုက်….ဘော်ဒါတို့သိတဲ့အကြောင်းအရာမျိုး လေးတွေလည်းပါသပေါ့။ မနက်ဖြန် သူ့ကို ကျနော် ဖုန်းခေါ်မယ့်အကြောင်း အခု အခုတော့ အိမ်ပြန်သင့်ပြီ အိပ်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်သေးတယ်။ သူ ကျနော်ပြန်မှာကို စိတ်မပါတပါ ခွင့်ပြုပေမယ့် သူ့မျက်လုံးထဲမှာ ကျနော့်ကို နေစေချင်သေးတဲ့အရိပ် အယောင်တွေ မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ ထရပ်လိုက်ကာ အင်္ကျီတွေ အိတ်တွေယူနေတဲ့ ကျနော့်ကို တံခါးဖွင့်ပေးပါတယ် ခင်ဗျ။ ကျနော် အခန်းအပြင်ကို ခြေအလှမ်း မြင်လိုက်ရတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းအကြောင်း ပြန်ပြောပြရင် ကောင်းမလား မကောင်းဘူးလားမသိ။ မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ လှပဆုံး အရိုးသားဆုံး ပြီးတော့ အမှောင်ရိပ်ကဲနေတဲ့အထဲဝယ် အရည်လဲ့ပြီး တောက်ပနေတဲ့ မျက်ဝန်းများပါပဲ။
အပြင်မှာ တော်တော်အေးတယ်ဗျ။ ကျနော့်မျက်နှာတွေ လက်တွေကို ဆောင်းလေရဲ့ကိုက်ခဲမှုကို ခံစားရတယ်။ အပြင်မှာကတော်တော် ဆိုးတာပဲ….ဘိုဘိုအခန်းထဲက နွေးထွေးမှုကို အပြင်ရောက်ပြီးမှ သတိထားမိတယ်။ ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ မပြောဖြစ်လိုက်ရတဲ့ အချိန် လေးကို တမ်းတမိရော။ ကျနော် သူ့ကို အနမ်းမိုးဆွေမိသလား သို့မဟုတ် ထွေးဖက်မိသလား ဒါမှမဟုတ် နှုတ်ဆက်စကား ပြောဆိုခဲ့ရုံပဲလား ဆိုတဲ့အခြေအနေကို သိလား? သူက ကျနော့်မျက်နှာရှိရာကို ငုံ့ကိုင်းပြီး အနမ်းပေးတာကို ကျနော်လက်ခံခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကိုတစ်ချက် အသာပြန်နမ်းခဲ့တယ် နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို နုနုညံ့ညံ့။ ကျနော် သူ့အနားက ဖယ်ခွာပေမယ့် သူက ကျနော့်ပခုံးတွေကိုဆွဲကိုင် ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်တဲ့နောက် ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ကျနော်တို့ထွေးဖက်မိကြပါတယ်။ ဒါ ပထမဆုံး အကြိမ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘဲ တိမ်းညွှတ်မိ လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက် အခြေအနေလေးကို အမြန်မကုန်ဆုံး စေချင်ပေမယ့် ကျနော့်ဦးနှောက်က ဒါမဖြစ်သင့်ဘူး မှားနေတယ် လို့ပြောနေတယ်။ ကျနော့်မသိစိတ်ထဲမှာ လျှို့ဝှက်စွာရှိနေသော ခံစားချက်ကို သတိပြုမိရတဲ့ခဏ ရုတ်တရက်ဆိုသလို မသိုးမသန့်ခံစား လိုက်ရပါရော။ ဒီလို ပထမဆုံးအချိန် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်တွေကိုထိန်းသင့်တယ်လို့ ဦးနှောက်ကပြောနေပေမယ့် ကျနော့် နှလုံးသားကတော့ အဆင်းဘီးတပ်ပေးနေသလို မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံနေရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ တဒိန်းဒိန်းနဲ့ပေါ့။
အပြင်မရောက်တရောက် အခြေအနေလေးက သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး အားလုံးရိပ်မိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ အခန်းထဲကို ၀ရုန်းသုန်းကား ပြန်ပါလာပြီးသကာလ ပထမဆုံးအကြိမ်ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာတွေကို နှစ်ဦးသားပြုလုပ်ဖို့တာဆူ လိုက်ကြပါတယ်။ Holy fuck….သူ့ကြည့်တော့ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်ထင်ရပေမယ့် အ၀တ်တွေဖယ်ရှားချိန်မှာတော့ တော်တော့်ကို ဆွဲဆောင်မှုပြင်းထန်တဲ့ ကောင်လေးပါပဲ။ ကျနော် သူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနောက်ကို ဘယ်လိုမှမငြင်းဆန်နိုင်ဘဲ အလိုက်သင့်ပါသွား ရပါတယ်။ သူလှုပ်ရှားနေတာတွေကို ကျနော့်မျက်ဝန်းထဲမှာ ကင်မရာနဲ့ တစ်ချက်ခြင်း တစ်ချက်ခြင်း ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံပြီးတစ်ပုံရိုက်နေ သလို စိတ်ထဲမှာ မှတ်တမ်းတင်နေမိပါရဲ့။ ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေဆဲ ကျနော့်နားကို သူချဉ်းကပ်လာပြီး ကျနော့်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်က အ၀တ်တွေကို ဆွဲချွတ်ပေးတော့ ဟန်မဆောင်နိုင်စွာ ပေါင်ကြားက ငနဲကအစွမ်းကုန်မာတောင့်နေလို့ ရှက်စိတ်တောင်ဝင်မိရပါ သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခပ်ကြပ်ကြပ်အနက်ရောင် တီရှပ်နဲ့ နက်ပြာရောင် ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ ၀တ်ထားဆဲ ဘိုဘိုရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုနောက် ကျနော် ဘာစကားမှမဆိုမိဘဲ အလိုက်သင့်နေပေးဖို့ ကြိုးစားမိရော။ စိတ်တွေ ထကြွလှုပ်ရှားလာတာက ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့တာ လည်းမလုပ် အတွင်းကျကျလိင်ဆက်ဆံတာလည်းမလုပ်ရဘဲ သူဝတ်ထားတဲ့ တီရှပ်ကိုမချွတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရချိန်လေးမှာကိုပဲ ဇာတ်လမ်းကအဆုံးသတ်တော့မယောင်ဖြစ်ရတယ်။ ခါးအစပ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာတဲ့အသားဆိုင်တွေဟာ အံ့အားသင့်ဖို့ ကောင်းသောလှေကားထစ်များအလား ဗိုက်ကြွက်သားများကအစ အမွှေးအမျှင်သိပ် မရှိသော ရင်အုပ် များထွက်ပြူလာလိုက်တာ ကျနော့်မျက်လုံးတွေဟာ ဘယ်ကိုမှမရွေ့မပြုမိလောက်အောင်ပဲ ဆွဲယူညှို့ငှင်ခံနေရပါ ရော။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း စိတ်ထိမ်းသင့်မှန်း သိပေမယ့် ပါးစပ်ကြီးဟပြီး ငေးမောနေမိတာများ သူဝတ်ထားတဲ့ တီရှပ်ကိုချွတ်ပြီး ကျနော့် မျက်ဝန်းများကို သူစိုက်ကြည့်လိုက်ချိန်ကျမှ အရှက်ပြေ ရယ်မောမိရပါတယ်။ ဒီအကြည့်တွေဟာ အတော်ထူးဆန်းပါတယ် အရက်သောက်ထားလို့ သွေးပူနေတာကြောင့်လား သူ့ဆွဲငှင်မှုကြောင့်လားမသိ ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုထဲက ညီဘွားဟာ အတင်းခေါင်းထောင်ထနေတာများ Twist ကနေတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ‘ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်? ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး ဘာတွေဆက်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာကိုလေ’ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် တွေလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ် အကြည့်က။
အခု ဘိုဘိုရဲ့ အ၀တ်ဗလာကျင်းနေတဲ့ ကိုယ်အထက်ပိုင်းက ကျနော့်ကို ထိုးနှက်နေသလိုပဲဗျာ အခြားဟာတွေကိုကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင် တော့ ဘူး။ ကျနော် ဘာလိုချင်နေတယ်ဆိုတာ သူသိဖို့အရိပ်အမြွက်လေးတွေပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ဖောင်းကြွနေတဲ့သူ့ ဂျင်းဘောင်းဘီပေါင်ခွဆုံကို စိုက်ကြည့်တာမျိုးပေါ့။ သူကလည်း ဒါကိုသိတယ် ဖောင်းကြွနေတဲ့ အဖုအဖောင်းကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ အသာအပွတ်အသပ်ပြုလုပ်သလို ဘောင်းဘီဇစ်ကို မဖွင့်ခင် ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးခြင်းအသာအယာဖြုတ်ပြတယ်။ အိုး….တစ်လုံးချင်း တစ်လုံးချင်းကြယ်သီးတွေဖြုတ်ရင်း တဖြည်းဖြည်းပွင့်ဟလာတဲ့ ဇစ်ကြောင့် ကျနော့်စိတ်တွေဆူဝေလာသလိုပါပဲ။ သူ ဂျင်းဘောင်းဘီကို အသာအယာအောက်ကိုဆွဲချွတ်လိုက် ပြန်တော့ အထုပ်အထည်နဲ့ပစ္စည်းရှိလူတန်းစာဖြစ်ကြောင်းပြဆိုတဲ့ အဖြူရောင် boxer ဘောင်းဘီပါးက ပေါ်လာပါတယ်။ သူ့ငပဲဘယ် လောက်ထွားတယ်ဆိုတာသိဖို့ ကောက်ကြောင်းကိုရှာတာ ဘောင်းဘီက ပါးမလိုနဲ့ထူနေတော့ အဖြူရောင်ဘောင်းဘီသားကို တွန်းထိုး ရုန်းကန်နေတာကိုပဲမြင်ရတယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ချွတ်နေကြအတိုင်း သူချွတ်ပြုလိုက်ကာ တန်းတစ်ခုပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ အားရစဖွယ် အဖုအဖောင်းကြီးကိုကြည့်နေရာက သူ့မျက်ဝန်းတွေကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ကာ အပြုံးတစ်ခုပေးမိလိုက်ရဲ့။ နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လျှာနဲ့သရပ် မိရင်း အောက်နှုတ်ခမ်းသား ကို ခပ်ဖွဖွကိုက်ပြကာ ကျနော် သူ့ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဟန်ပြင်ပါတယ်။ ဒါကို သူက ကျနော်အသင့်ဖြစ်တဲ့အနေ အထားလို့ယူဆကာ ကျနော်ထိုင်နေရာကိုတိုးကပ်လာပါရော သူ့ဆီးစပ်နဲ့ကျနော့်မျက်နှာထိလုလုအခြေအနေထိပေါ့နော်။ ကျနော် အရှက်သည်းလိုက်ဖို့ ရှောင်လွှဲလိုက်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘဲ အလိုက်သင့်အေးဆေးဖြစ်အောင်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ် အခုပဲသူ့ငပဲထိပ်ခေါင်းလေးကို လျက်ပြုကာ လည်မျိုထဲထိတိုင် မျိုချပစ်လိုက်ချင်ပါပြီ။
ကျနော် သူ့မျက်လုံးများကိုစိုက်ကြည့်နေတာကိုမရွေ့ဘဲ လက်များကတော့ တင်းရင်းတစ်ရစ်နေတဲ့ သူတင်သားဆိုင်များပေါ်ရောက်ရှိတို့ထိ နေပါပြီ။ သူနဲ့စတွေ့ကတည်းက သတိပြုမိရသော အလွန်တရာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဒီတင်သားဆိုင်တွေဟာ အခုတော့ ကျနော့်လက်ထဲမှာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှုပ်ရှားနေရတယ်လေ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ညအိပ်ကာနီးအချိန်ကျမှ ဇာတ်လမ်းစချင်မိတတ်ပေမယ့် အခုတော့ ကောင်းနေပြီ အရသာက။ သူ့ခန္ဓကိုယ်ကြွက်သားတွေဘယ်လောက်တင်းရင်း ကျစ်လစ်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော့်လက်ထဲထိတွေ့ကိုင်တွယ်နေရတဲ့ တင်သားဆိုင်တွေရဲ့ ကျစ်လစ်တင်းရင်းမှု ချောမွေ့နုညံ့မှုတွေက ရင်ခုန်စေအောင် သက်သေပြနေပါတယ်။ ကျနော် ပွတ်သပ်ရုံနဲ့အားမရတော့ဘဲ သူ့ခါးအစုံကို ကျနော့်ဘက်ကိုစွဲယူလိုက်ရင်း ကြီးမားလှတဲ့အထုပ်အထည်ကြီးကို တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့တို့ထိနမ်းရှိုက်မိပါရဲ့။ သူကလည်းပိုမိုတိုးကလပ်လာသလို ဘောင်းဘီထဲက အမြှောင်းလိုက်ထနေတဲ့ အသားချောင်းကြီး နဲ့ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေ နှာတံတွေကို တိုးတိုက်နေတာများ ချုပ်နှောင်ထားဆဲ အဖြူရောင် အ၀တ်စနောက်ကွယ်ကနေ အခုပဲ ခုန်ထွက်တော့မယ့်အတိုင်းလေ။ ကျနော့်ခေါင်းကိုအသာနှိမ့်လိုက်ရင်း လျာကိုအပြားလိုက်ထုတ်လိုက်ကာ သူ့ရွှေဥတွေကို ဘောင်းဘီအပေါ် ကနေပဲ လျက်ပြုလိုက်ပါတယ် ပထမဆုံး။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူရှိုက်မိတဲ့ခဏ ကျနော့်နှလုံးသားဟာ လေထဲလွင့်နေသလိုခံစားရမိပြီး ယောက်ျားဆန်တဲ့အနံ့ တစ်မျိုးက နှာခေါင်းထဲဝယ် ဝေ့၀ိုက်ကျဆင်းလာပါတော့တယ်။
ဒီအဖြူရောင်ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြစ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ ၀ိုင်းစက်ပြည့်တင်းနေတဲ့တင်သားဆိုင်များကြောင့် ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီ ခါးစည်းကြိုးထဲ ကျနော့်လက်ချောင်းတွေကိုအသာထိုးထည့်လိုက်ရင်း ခပ်ဖြေးဖြေးလေးအောက်ကိုဆွဲချရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကြီးထွားတင်းတောင့်နေတဲ့သူ့ငပဲကြောင့် ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးကိုရုတ်တရက်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုပါက ဗန်းကနဲ ကျနော့်မျက်နှာကိုလာ ရန်ရှာနိုင်တာကြောင့်ပါ။ တဖြေးဖြေးလျောကျလို့ပေါ်လာတဲ့ ဆီးစပ်တလျောက် ကျနော့်နှုတ်ခမ်းသားများနဲ့ တရွှတ်ရွှတ်အနမ်းပေးရင်း ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်နေရာမှာ ကျနော့်ကိုယ်ပိုင်ညီလေးကလည်း ပေါင်ခွကြားထဲကနေ သဘောတူကြောင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြနေရော။ အာ…. ပူနွေးနေတဲ့ သူ့ငပဲကြီး ကျနော့်မျက်နှာနဲ့ မထိခလုပ်ထိခလုပ်ဖြစ်နေတာ အတော့်ကိုရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတာပါပဲ။ ခပ်ကားကားရပ်နေတဲ့ သူ့ ခြေတံနှစ်ခုကြား ဒူးထောက်ဝင်ရောက်လိုက်ရင်း ရွှေဥတွေကို အသာပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မိပါတယ်။ အမွှေးအမျှင်နည်းပါးသော အလုံးအထည် ရှိတဲ့ ကပ္ပာယ်အိတ်ကို လျာနဲ့လျက်ပြုဖို့ ကျနော်မမေ့မလျော့ပြုလုပ်မိတော့ သူ့လက်တစ်ဘက်ဟာ ကျနော့်ဆံပင်တွေကို ကိုင်တွယ်ဆော့ ကစားရော။ ဟိုသည်ရမ်းမယောင်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို ကျနော် လက်နဲ့အသာကိုင်လိုက်ကာ ထိပ်ပိုင်းလေးကို ဦးဆုံးငုံမိလိုက်စဉ် သတိပြုမိရ တာကတော့ သူ့ပစ္စည်းဟာ အလွန်တရာမကြီးပေမဲ့ တော်တော်တော့ အားရစရာကောင်းတဲ့ဆိုဒ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ငုံလိုက် အပေါက်လေးကို လျာနဲ့ကစားလိုက်ပြုမိပြန်တော့ သတိထားမိရတာက အရည်ကြည်တွေစိမ့်ထွက်လာတာကို ရူးသွပ်စွာ ခံစားမိရပါ တယ်။ သူပြီးတော့မလားဆိုပြီး ကျနော် ပြာပြာသလဲ ပြင်ဆင်မိတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး စိတ်လှုပ်ရှားတာသက်သက် ဒီလောက်နဲ့တော့မပြီးဘူးဆို လို့ နှစ်ဦးသား ရယ်မောကြရပါသေးတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ငုံပြုနေရာက အတံတစ်ချောင်းလုံး အာခံတွင်းထဲထိ လျောကနဲသွင်းချ လိုက်ပြန်တော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းတွားသံသဲ့သဲ့ထွက်လာပါရဲ့။
ကျနော်သူ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ မျက်ဝန်းများကို မှေးမှိတ်ကာ သာယာနေသောပုံရိပ်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ ကျနော်ဆက်မ-ုပ်ဘဲ ရပ်လိုက်မိစဉ်ခဏမှာတော့ သူ့မျက်ဝန်းများပြန်ပွင့်လာကာ ကျနော့်မျက်နှာကို ငုံ့ကြည့်ပါရော။ ကျနော်ပြုံးမိရကာ လျာကိုအပြား လိုက်ပြန် ထုတ်လိုက်ရင်း ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို လျက်ပြုပေးမိပါတယ်။ ကျနော်နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာ သူသတိ ထားမိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိနေတာ အမှန်ပါပဲ။
ကျနော် သူ့ငပဲကို ညာလက်နဲ့အသာကိုင်ကာ အာခံတွင်းထဲတည့်တည့်ဝင်အောင်ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ပါးစပ်လေးကို အသာဟာ လျာလေးနဲ့ ငပဲခေါင်းတစ်ဝိုက်ကိုရစ်ပြုကလိပြီးနောက် အာခံတွင်းထဲ နှုတ်ခမ်းသားထဲညှပ်ပြီး အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက်တဲ့နောက် မြင်ခဲ့ရ တာက သူ့မျက်နှာရဲ့ အမူအယာခံစားချက်ပါပဲ။ လည်မျိုနဲ့ သူ့ပစ္စည်းအထာကျအောင် အဆင်ပြေပြေမျိုကျလို့ရအောင် အနေအထားပြင်ဆင် လိုက်ကာ ပါးစပ်ကိုအသာဟာ ငပဲကိုတဖြည်းဖြည်းအထဲသွင်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့ဖီလင်ပိုကောင်းအောင် ပါးစပ်ကြီးဟ တိုက်ရိုက်သွင်းလိုက် တာမဟုတ်ဘဲ နှုတ်ခမ်းသားများကြားကနေ တဖြည်းဖြည်း စုပ်ပြုပြီးသွင်းတာပါ။ မျက်ဝန်းများကို တဖန်ပြန်မှေးမှိတ်ကာ သူ့နှုတ်ခမ်းက ညည်း တွားသံသဲ့သဲ့ထွက်လာတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ ချစ်စဖွယ်သူ့မျက်နှာလေးဟာ သက်ပြင်းချသံတစ်ချက်နဲ့အတူ သာယာမိန့်မူးနေတဲ့ဟန် က တစ်မျိုးဆိုတော့ နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေကြားထဲကနေ လည်မျိုထဲထိတိုင် အထုတ်အသွင်းလုပ်မိနေတဲ့ ကျနော့်ကိုပိုမိုပြုစုစေချင်စိတ်ဖြစ် ပေါ်စေတာအမှန်ပေါ့နော်။
ပြုံးလိုက်မဲ့လိုက် နှုတ်ခမ်းလေးတွေတွန့်သွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့မျက်နှာအမူအရာနဲ့ မိန့်မူးသံထဲမျောနေတဲ့ကျနော် ခဏကြာမှ အာရုံပြန် ကပ်မိကာ သူ့ကိုကောင်းကောင်းလေး ပြုစုပေးဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ ရှည်လမျောအသားချောင်းကြီးကို ကျနော့်ပါးစပ်ထဲ အထုတ် အသွင်းလုပ်နေစဉ်ဝယ် လျှာကိုအပြားလိုက်လုပ်ကာ ရစ်ပတ်စုပ်မျိုမိသလို ရွှေဥတွေကိုလည်းလက်နဲ့အသာပွတ်သပ်ကစားပေးပြီး နောက် တစ်ချက်တစ်ချက် အသာဖျစ်ညှစ်တာမျိုးလည်းလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့ ညည်းသံဟာ ပိုမိုကျယ်လောင်လာပြီး အခုပဲပြီးတော့မယ့်အတိုင်း အထွဋ်အထိပ်တစ်ဖြည်းဖြည်းရောက်လာတဲ့ အသံဖြစ်လာပါပြီ။ သူ့အသံကြားရလေ ကျနော့်သွေးတွေပိုမိုဆူပွက် ပြီး ဒီထက်ပို လှုပ်ရှားချင်တဲ့စိတ်တွေက များလာကာ ကျနော့်ပေါင်ကြားကညီဘွားကလည်း အစွမ်းကုန်ခေါင်းငြိမ့်ခေါင်းခါလုပ်နေရတော့တယ်။ ခေါင်းကြီးကိုအသာမော့….နှုတ်ဖျားက တရှီးရှီးညည်းကာ ခြေဖျားလေးတွေ ကွေးညွှတ်ရင်း တစ်ခါတစ်ခါ ကျနော့်ဆံပင်တွေကိုဆုပ်စွဲကိုင် တတ်တဲ့ သူ့အပြုအမူအပေါ် ကျွန်တော်သာယာတယ်ဗျ။ အခုအချိန်ထိတော့ ကျနော့်ငပဲအပေါ် အာရုံစိုက်အလုပ်များဖို့အချိန်မကျရောက် သေးပေမယ့် မိုးပေါ်ကို ညွှန်ပြနေတဲ့ သူ့ကြောင့် ကျေနပ်နေဆဲပါ။
ကျနော့်ပါးစပ်ကနေ သူ့ငပဲကိုကိုင်ပြီးဆွဲထုတ်သွားတဲ့ အပြုအမူကြောင့် ရုတ်တရက်အံအားသင့်သွားရပါတယ်။ သူ့မျက်နှာကိုတွေတွေဝေ ဝေနဲ့ မော့ကြည့်မိလိုက်တာပေါ့ ကျနော့်အဖြစ်လေးကလေ။ တော်ပြီ တန်ပြီ ဒီလောက်ကလေးပဲ တော်ကြစို့လို့ပြောလိုက်မှာကို ကျနော်စိုးရိမ် စိတ်ဝင်မိတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူက ကျနော့်မျက်ဝန်းတွေထဲ စိုက်ကြည့်ပြီး အမျိုးအမည်မသိအပြုံးတစ်ချက်ပြုံးပြတယ်လေ။
အနားနားကပ်မတ်တပ်ရပ်နေရာကနေ သူ နောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ကာ ၀တ်ထားတဲ့ boxer ဘောင်းဘီတိုကို သူ့ဒူးအောက်ထိလျှောချ ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခန်းကြီးရဲ့ အဆုံးနံရံတွေနား ကပ်ထောင်ထားတဲ့ ဘီရိုကြီးတစ်ခုနား လှမ်းသွားလိုက်ကာ အံဆွဲတစ်ခုကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ရင်း အနက်ရောင်ပုလင်းတစ်ခုကို ယူချလာတယ်။ အာ…အဲ့တာ Lube ဘူးကြီးပဲ။ သူ အံဆွဲကိုအသာပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးနောက် ကျနော်ရှိရာကိုပြန်လာလိုက်တယ်။ သူ အဲ့ဒီပုလင်းကို ကျနော့်အားလှမ်းပေးလိုက်ပြီးနောက် သူ့လက်အစုံကတော့ ကျနော့်ခါးက၀တ်လက်စ ဘောင်းဘီတိုကို တင်ပါးတွေပေါ်ကတစ်ဆင့် အောက်ကိုဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ရဲ့။ ကျနော်လည်း သူချွတ်လို့ရအောင် အလိုက်သင့်နေပေးလိုက်ရင်း ဘာကြောင့် ကျွန်တော် ပါးစပ်နဲ့ပြုစုနေတဲ့အနေအထားမှာ သူထသွားပြီး အခုလိုတွေလုပ်နေရသလည်းဆိုတာ မှန်းဆလို့ရပါတော့တယ်။ ကျနော် ဘယ်လိုနေချင်တယ် ဘာဆိုတာ သူသတိထားမိအောင် မပြောမဆိုမညွှန်ပြပေမယ့် သူ့စိတ်ကူးနဲ့ မှန်းဆပြီး ဇာတ်လမ်းရှေ့ဆက်ဖို့ သူကြိုးစားနေတာပါ။ ကျနော်နဲ့ မတွေ့ဆုံခင် ကျနော်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ မဖြစ်ခင်ကတည်းက သူ့ဖာသာသူ သာယာမှုရှာခဲ့ဖူးဟန်တူပါတယ်။ သဘောပေါက်ပြီးသားလူတစ်ယောက်ကို ထပ်မသင်ရတော့တာကြောင့် ကျနော်ဝမ်းသာမိပါတယ် သူလုပ်ဆောင်နေသမျှကို။ ဘိုဘိုက ကျွန်တော့်အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ခြေထောက်တွေကတစ်ဆင့် ခြေဖ၀ါးတွေကိုကြွစေကာ ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီးနောက် ကြမ်းပြင်ပေါ်က ကော်ဇော အထက်ကိုပစ်ချလိုက်တယ်။ နောက်တော့ သူ့လက်ကို လှမ်းကိုင်လိုက်ကာ ခဏနေက Lube ဘူးအနက်လေးပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ အဲ့ဘူး အဖုံးလေးကိုဖွင့် ဇော်ထိုးထားလိုက်ကာ ခပ်ချွဲချွဲ အရည်ကြည်အချို့ကို သူ့လက်ဖ၀ါးတဲ့ညှစ်ချလိုက်ပါတယ်။ အဖုံးလေးပြန်ပိတ်ကာ ကျနော့်ကိုပြန်လှမ်းပေးရင်း သူ့လက်ဖ၀ါးပေါ်က ချောဆီအပုံလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့အသာပွတ်သပ်ပွားများလိုက်ကာ မာတောင့်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲအနှံ့ပွတ်သပ်လိမ်းကျံပေးပါရော။
ပထမဆုံးအကြိမ် သူ့လက်အစုံနှင့် ထိတွေ့ပွတ်သပ်လိုက်ကထဲက ပွတ်သပ်ပုံနည်းလမ်းအရကော သူ့သဘာအရကော ကျနော့်စိတ်တွေ တဆတ်ဆတ်တုန်သွားရတဲ့အထိ ခံစားချက်တစ်မျိုးထူးစေလွန်းပါရဲ့။ သူ အပြုံးတစ်ဝေေ၀နဲ့ ကျနော့်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်ကာ ကျနော့်ငပဲကို ချောဆီတွေနဲ့ပိုမိုပေကျံစေတယ်လေ။ သူလုပ်ဆောင်တာ ပြီးသွားတဲ့နောက် ကျနော့်လက်က ချောဆီဘူးကိုပြန်ယူကာ နည်းနည်းလေးများ အောင် ချောဆီတွေကိုညှစ်ယူလိုက်ပြန်ရင်း ကျနော့်ငပဲကို ထပ်မံပွတ်သပ်လိမ်းကျံလိုက်ကာ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ကစားပါတယ်။ ကျနော် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုဆိုတာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမပြောတတ်ပေမယ့် အခုတော့ သူလုပ်နေတာတွေက ကလိထိုးသလိုလို စိတ်တွေ အရူးအမူးဖြစ်အောင်ကောလုပ်နေသလိုပါပဲ။ လေထဲမျောလွင့်နေသလိုလိုနဲ့ ဒီ့ထက်ပိုတဲ့ခံစားချက်တွေကိုရယူခံစားချင်နေမိပြီ။
မမေ့နိုင်တော့မယ့်အခိုက်အတန့်ကလေးလာပါပြီ လှဲလျောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်ကို သူဂရုတစိုက်နဲ့ခွလိုက် တယ်လေ။ သန်မာတဲ့ သူ့ခြေတံတွေရဲ့အထိအတွေ့ကို ကျနော့်ပေါင်ခြံရဲ့ဘေးနားစီတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ခံစားရတာဆိုတော့ သူ့ကိုယ် အလေးချိန်ကိုချိန်ဆလို့ရနိုင်ပါရဲ့။ သူ့ကိုယ်သူ တဖြည်းဖြည်းချင်းငုံ့ကိုင်းထိုင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း သူ့အကြည့်တွေဟာ ကျနော့် မျက်ဝန်းဆီကို စူးစူးစိုက်စိုက်အာရုံစိုက်ဆဲ။ ဆိုဖာပေါ်လှဲနေတဲ့ ကျနော့်နံဘေးကိုသူအလိုက်သင့်ဒူးထောက်လို့ရချိန်မှာတော့ ချောမွေ့သော တင်းရင်းဝိုင်းစက်နေသော တင်ပါးများကို ကျွန်တော့်ငပဲနဲ့ချိန်ကိုက် တအိအိထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ ကြပ်သိပ်နေသော ကြွက်သားများရဲ့ ညှစ်အားကြောင့် ခရေ၀ထဲတိုးဝင်နေရတဲ့ ကျနော့်ငပဲရဲ့အထိအတွေ့ဟာ တစ်ကမ္ဘာလောက်ကြာသလားလို့ထင်ရပါရော။ ဆုံးဆုံးထိဝင်သွား ချိန်မှာတော့ သူခဏငြိမ်လိုက်ကာ နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံထွက်လာတာက ကျနော့်ပါးစပ်ကညည်းလိုက်ချိန်နဲ့ ထပ်တူဖြစ်နေလို့ ပြုံးမိရပါ တယ်။ အာ….ကြွတက်မိတဲ့ ကျနော့်ခေါင်းကို ဆိုဖာပေါ်ပြန်ချလိုက်ချ သူ့တင်ပါးတွေကို အကြွအဖိစလုပ်ပါရဲ့။ အပေါက်ကျဉ်းလေးဟာ ချောဆီကြောင့် အ၀င်အထွက်ကောင်းနေရသလို ကျနော့်ငပဲဟာလည်း ပြည့်တင်းလှသော သူ့တင်ပါးကြွက်သားများကြောင့် တစ်မူထူးသော အရသာကိုခံစားနေရပါတယ်။
ထူးဆန်းလှသောခံစားချက်တစ်ခုက ကျနော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံး သူ့တင်ပါးထဲ ခရေ၀ကတစ်ဆင့် ဆုံးဆုံးမြုပ်သွားချိန်ဝယ် ဒီကမ္ဘာမှာ အပျော်ဆုံးလူသားတစ်ယောက် ဖြစ်သွားရတာပါပဲ။ အခုတော့ နှစ်ယောက်သား အစွမ်းကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေစတင်ဖြစ်ကြပါပြီ။ သူကလည်း အပေါ်ကနေထိုင်ပြီး မျိုးစုံကဆုန်ပေါက်သလို ကျနော်ကလည်း သူ့ခါးအစုံကိုလက်နဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်ကာ အောက်ကနေပင့်ဆောင့် လိုက် သူ့တင်သားဆိုင်တွေကို အားရပါးရဖျစ်ညှစ်လိုက်နဲ့ မီးကုန်ရမ်းကုန်ပေါ့။ အိုး…..ကျနော့် ဦးခေါင်းထဲကို လျှပ်စစ်ဓာတ်လှိုင်းတွေ တဖျပ်ဖျပ်စီးဆင်းနေသလို ခံစားချက်တွေက ဘယ်လိုမှန်းမသိအောင် ရင်ထဲလှိုက်ဖိုနေပါတယ်။ ခပ်ကြပ်ကြပ် ခရေ၀ထဲကိုတိုးဝင်နေရတဲ့ ငပဲဆီက အထိအတွေ့ကလည်း ကျနော့်ခြေဖျားလေးတွေ ကွေးညွှတ်မိရတဲ့အထိ တစ်ကိုယ်လုံး ဘယ်လိုမှထိန်းသိမ်းမရ မုန်တိုင်းမွှေနေပါပြီ။ ကျတော်တို့ နှစ်ဦးသားရဲ့ စိတ်တွေ ကိုယ်ခန္ဓာတွေဟာ တစ်ကိုယ်တည်း တစ်စိတ်တည်းဖြစ်သွားသလို ပူးပေါင်းမိသွားကြပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာလည်း ဂဟေဆက်ထားကြတာပေါ့။
အချိန်ကောင်း ဆယ်မိနစ်ဖြတ်သန်းသွားပြီးတဲ့နောက် ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သား ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့လျော့သွားကြပါရဲ့။ ဘိုဘိုကလည်း ကျနော့်အပေါ်ခွထိုင်ပြီး မြင်းစီးနေတာများ သူတတ်နိုင်သမျှအမြန်နှုန်းနဲ့လေ။ သူ့ perfect rhythm နဲ့ perfect angle ကိုအရအမိတွေ့ခဲ့ တော့ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ကျနော့်ကို ကျေနပ်မှုအစွမ်းကုန်ပေးနိုင်နေသလို သူ့ကိုယ်သူလည်း သာယာမှုရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး မိန့်မူး သာယာမှုပေါင်းစုံနဲ့ အော်ညည်းမိကြပါရော။ ခပ်နွေးနွေး အရည်တစ်စက် ကျနော့်ဗိုက်သားပေါ်ကျလာတယ်လို့ ခံစားမိရတော့ နည်းနည်းငဲ့ ကြည့်လိုက်တာ ဘိုဘို့ငပဲကနေ အရည်ကြည်တစ်ချို့စိမ့်ကျနေတာကို မြင်ရပါတယ်။ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကနေ မလွဲဖယ်မိသလို ကျနော်သူ့ငပဲ ကို ညာလက်နဲ့ဆွဲကိုင်မိတယ်ပေါ့။ အသာအယာခပ်သွက်သွက် လက်ကစားပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ ဘိုဘို့လှုပ်ရှားမှုစည်းချက်တွေဟာ အရှိန်မြင့်လာသလို သူ့နှုတ်ဖျားကနေလည်း အော်ညည်းသံက ပိုကျယ်လာပါတယ်။ တင်သားတွေနဲ့ ကျနော့်ဆီးစပ် ပေါင်တံတွေနဲ့ ရိုက်ခတ် သံဟာလည်း ပိုအသံထွက်လာရသလို ကျနော့်ငပဲကနေလည်း အရည်ကြည်တစ်ချို့သူ့ခရေထဲစိမ့်ကျစပြုပါလေ့။
ကျနော့်ငပဲကို သူ့ခရေထဲ ခပ်မြန်မြန်ပင့်ထိုးလိုက်သလို သူ့ငပဲကိုညာလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ကစားနေတာကိုလည်း အရှိန်မြှင့်ပေးလိုက်တာ စည်းချက်ကိုမှန်နေတာပါပဲ။ ကျနော် climax ဖြစ်ခံနီးပြီးလို့ ကိုယ့်ဖာသာ ခံစားသိချိန်မှာတော့ နုညံ့သောသူ့တင်သားဆိုင်များနဲ့ ကျနော့် ပေါင်ခြံတွေ ထိခတ်သံက ကျယ်လောင်နေတာကို သတိထားမိပါရဲ့။ ကျနော့်နှုတ်ဖျားက အားမလိုအားမရ အော်ဟစ်သံက စထွက်လာသလို သူ့နှုတ်ဖျားက အော်ဟစ်သံကလည်း ပိုပိုကျယ်လောင်လာပါတယ်။ ကျနော့်သုက်ရည်တွေဟာ ကျစ်လာသော ဆီးအိမ်နဲ့အတူ လိင်တံ တလျောက် တိုးဝင်လာတော့မယ် အဖြစ်ဟာလည်း နီးလွန်းနေပါပြီ။ နှစ်ဦးသားရဲ့ စိတ်အဟုန် အထိအတွေ့သာယာမှုတွေ ခံစားချက်အဟုန် တွေကို ခဏတော့ ထိန်းချုပ်လို့ တစ်ပြိုင်တည်း ပန်းထုတ်ကြဖို့ ကြိုးစားကြမယ်။
‘ပြီးကာနီးပြီလား’ ကျနော် ဘိုဘို့ကိုမေးလိုက်တယ်။
‘ငါ…ငါပြီးကာနီးပြီ’ တဲ့ ဘိုဘိုက ပြန်ဖြေတယ်။ သိသားပဲ…….တကယ်တန်း ဘိုဘိုပြန်ဖြေဖို့မလိုကြောင်း ကျနော်သိနေရတာက ကျနော်လည်း သူ့လိုပဲ ထိပ်ဆုံးရောက်ကာနီးနေပြီဗျ။
သူသည်လည်း ကဆုန်ပေါက်နေတာကို ဆက်လုပ်သလို ကျနော်လည်း သူ့ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ကာ လက်ကစားမှုကို စက္ကန့်အနည်းငယ် လောက် ဆက်လုပ်လိုက်တာ သူ့ကပ္ပာယ်အိတ်ကပ်ပြုလာတာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ သူ့ခရေကြွက်သားတွေ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အတင်းဖျစ်ညှစ် လိုက်တာကို ကျနော်ခံစားသိရှိလိုက်ရသလို နှုတ်ဖျားက “ငါ……ငါ….ပြီးပြီ….ပြီး…အာ….ပြီ” လို့ အော်ညည်း လိုက်သံကိုလည်း ကြားလိုက်ရရင်း သုက်ရည်တွေဟာ ရွှဲကနဲထွက်လာပါတယ်။
ကျနော် သာယာစဖွယ်ဒီအခိုက်အတန့်လေးကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမတွေးဘဲ လွှတ်ပေးလိုက်မိပါတယ်။ သူ့အတွက် သာယာမှုအစွမ်းကုန်ပြုလုပ်ပေးမိသလို ချောဆီကောင်းကောင်းကြောင့် နှစ်ဦးသားအဆင်တပြေ အဆင်ချောခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ နောက်ပြန် မလှည့်ကြေးဖြစ်ခဲ့ရပါရော။ နောက်ဆုံးအကြိမ် သူ့တင်ပါးတွေက ကျနော့်ပေါင်ခြံကို ဖိကပ်လိုက်သလို ကျနော်ကလည်း ညီဘွားကို သူ့ခရေ အတွင်းထဲဖိဆောင့်ဝင်လိုက်တာမှာ သူ့ prostate ကို ကောင်းကောင်းတစ်ချက်ထိသွားမိရတော့ အော်ညည်းသံဟာ ပိုမိုအသက်ဝင်သွား ရပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆူညံမှုနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ အခုတော့ နှလုံးခုန်သံတွေ၊ သွေးခုန်နှုန်းတွေ ပြီးတော့ အဖြူရောင် စီးကပ်ကပ်အရည်တွေ ၀န်းကျင်အနှံ့ပက်ဖြန်းခြင်းအခြေအနေဖြင့် စတင်ငြိမ်သက်စပြုပါပြီ။ ဘိုဘိုရဲ့ကျင်းထဲမှာစိမ်ထားတဲ့ ကျနော့်ငပဲဟာလည်း ကိုယ့်ချောဆီအဖြူတွေနဲ့အတူ အပြင်ကိုပြန်ထွက်ချင်စပြုလာသလားလို့ထင်မိတယ်။ ဘိုဘိုရဲ့ သုက်ရည်အတော်များ များဟာလည်း အမွှေးအမျှင်မဲ့ ကျနော့်ရင်အုပ်တွေနဲ့ ဗိုက်သားပြင်အနှံ့ရောက်နေသလို ပမာဏနည်းနည်းလောက်ကလည်း ကျနော့်မေးဖျား ကိုစိုစွတ်နေတယ်ဗျ။ ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး သူ့သုက်ရည်စိုစိစိနဲ့ ကိုယ်အနံ့အသက်တွေကြား ငြိမ်သက်လှဲလျောင်းနေရတာကို ကျနော် သဘောကျနေသလိုပါပဲ။ ကျနော်တို့ဇာတ်လမ်းတွေလည်းသိမ်းပြီးပြီ ရင်ခုန်သံ နှလုံးခုန်သံတွေလည်း ငြိမ်စပြုကာ ပုံမှန်အခြေအနေကို ရောက်ခဲ့ပါပြီ။
ဘိုဘိုတစ်ယောက် ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲလဲပြိုကျဆင်းကာ သူ့လက်တံတွေနဲ့ထွေးဖက်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ သို့မဟုတ် နှစ်ဦးစလုံးရဲ့အသက်ရှူသံ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တဲ့အထိ ဒါမှမဟုတ် ရင်ချင်းအပ် တစ်ယောက်ရင်ဘတ်ကိုတစ်ယောက် ပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်ရင်းရှေ့ဆက်ကြပါတယ်။ ဘိုဘို့ခရေထဲမြုပ်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲဟာ ပြန်ပျော့စပြုလာပြီ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ခံစားသိနေပေမယ့် အပြင်ကို ဆွဲမထုတ်ဖြစ်သေးပါဘူး။ သူ ကျနော့်ကိုဖက်တွယ်ထားရာကနေ အသာထရပ်လိုက်ကာ ပျော့နေသော စိုစွတ်နေသော ကျနော့်ငပဲကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ ကျနော့်ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်နေရင်း ကျနော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို စူးစမ်းနေပါတယ်။ ကျနော်သည်လည်း သူ့ကိုပြန်ပြီးကြည့်နေမိတာပေါ့နော်။ ကျနော့်ကိုယ်ပေါ် အဲ ဗိုက်သားတွေ ရင်အုပ်တွေ မေးစိတွေမှာ နှစ်ယောက်သားရဲ့ သုက်ရည်တွေ ဖုံးအုပ်နေရင်းက ပေါင်ခြံတွေ နံဘေးတွေကို စီးကျနေတဲ့အဖြစ်နဲ့ သူမြင်သွားမှာသေချာပါတယ်။
သူ နှစ်လိုလက်ရ ကျနော့်ကိုပြုံးပြပါတယ်။ အပြစ်ကင်းသောသူ့အပြုံးများကြောင့် သူ့ကိုကြည့်ရတာ ချစ်စဖွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ် ပြန်မြင်ဖြစ်ရပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံချိန်ကပြုံးပြသော သူ့အပြုံးလေးတွေအတိုင်းပါပဲ။ ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ သူ့မိဘ များရဲ့ဧည့်ခန်းဆိုဖာပေါ်မှာ ကျနော့်ကိုတစ်ယောက်တည်းပြစ်ထားပြီး ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လေ။ နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ တဘက်တစ်ထည်နဲ့ပြန်ပေါ်လာပြီး ကျနော့်ကို အဲ့ဒီတဘက်ကိုကမ်းပေးတာကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖြစ်ရပါရဲ့။ဧည့်ခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်က သူ့ အ၀တ်အထည်များကို ကောက်ယူကာ ကျနော့်ရှေ့မှာဝတ်ဆင်နေတာကို ကျနော် အရသာခံကြည့်နေဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ အသွင်အပြင်က လိင်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေသလို သားသားနားနားရုပ်ရည်ကြောင့်လည်း ကြည့်ရမြင်ရပသာဒဖြစ်လှတယ်။ ကိုယ်ပေါ်ကို သန့်စင် အောင် သုတ်သင်သန့်ရှင်းပြီးနောက်မှ ကျနော်ထထိုင်လိုက်ကာ အ၀တ်များကိုကောက်ယူဝတ်ဆင်မိပြန်တော့ သူက ဘေးနားကဆိုဖာခုံမှာ ထိုင်ရင် ပြန်ကြည့်နေပြန်ရော။ ကျနော်သူ့ဘေးက ဆိုဖာမှာပြန်ထိုင်လိုက်တော့ သူ ကျနော့်ပခုံးပေါ် ဦးခေါင်းနဲ့မှေးမှီရင်း ကျနော့်ခါးအစုံကို လက်တွေနဲ့ရစ်တွယ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော် သူ့ဘက်ခေါင်းလှည့်လိုက်ရင်း သူ့နဖူးလေးကို အနမ်းချွေမိပါရဲ့။ ကျနော် သူ့နဖူးလေးကို အနမ်းချွေချိန်မှာ ပြုံးလိုက်တဲ့ အပြုံးပွင့်လေးဟာ ရိုက်ဖူးသမျှ မြင်ဖူးသမျှ ဓာတ်ပုံတွေထဲက အပြုံးတွေထက် အချိုမြိန်ဆုံးပါပဲ။ ကျနော် သူ့ပါးပြင်ထက် အနမ်းချွေဖို့ကြိုးစားမိချိန်မှာတော့ သူအိပ်မောကျသွားကြောင်း သိလိုက်ရတယ်။ ဒီလို အနေအထားလေးနဲ့ သူ ကျနော့်ပေါ် မှီတွယ်အိပ်ပျော်နေတာကို ငြိမ်ပေးဖြစ်ပါရော။ ကျနော်ပျော်တယ် ဒီခံစားချက်လေးကိုနှစ်သက်တယ် သူပေးတဲ့နွေးထွေးမှုနဲ့ ရင်ခုန်မှုတွေက အခုကိုရင်ထဲမှာ ကတုန်ကယင် ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ သိလား…..ဘယ်လိုမှပြန်မပြောပြတတ်တဲ့ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုလေးရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးဗျ။
အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့ ကျနော်အိမ်ပြန်ပြီး အနားယူအိပ်စက်ဖို့သတိကပ်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်သူ့ကိုမနှိုးလိုက်ချင်ဘူး ဗျာ။ သူ့ကြည့်ရတာ ပျော်ရွှင်ပြီး အရာရာငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် အိပ်စက်နေသလိုမို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော် သတိထားပြီး အသာလေးထ သူ့ခေါင်းကို တကယ့်ငြင်သာစွာဖြင့် ဆိုဖာလက်ရန်းပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးအသေးလေးခံကာ အိပ်စက်စေလိုက်တယ်ဗျ။ သူအိပ်စက်နေတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ရတာ ချစ်စရာအလွန်ကောင်းနေတော့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတော့ ကျနော် သူနဲ့အတူနေချင်ခဲ့ပါတယ်။ အင်း….ဆိုသော်ငြားလည်း တကယ်တန်း လိုတာထက်ပိုနေလား ခံစားချက်များကလေ။ နံရံမှာချိတ်ထားတဲ့ ကုတ်အင်္ကျီကို လှမ်းယူလိုက်ရင် တိတ်တဆိတ်အိမ်ကို စွန့်ခွာလိုက်ကာ တံခါးကိုလော့ခ်ျလိုက်ပါတယ်။ တံခါးသော့ကိုတော့ စာထည့်ပေါက်ကနေ အတွင်းကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
အကောင်းဆုံး အဦးဆုံး ကြုံဆုံဖူးတဲ့ လိင်အတွေ့အကြုံထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် လိင်အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ခဲ့တာရော ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ အခြားလူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုပြီးပြည့်စုံအောင် ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်ရမယ် ဆက်ဆံရမယ် ဆိုတာကို သိစေခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သား။ အထူးစပါယ်ရှယ်အတွေ့ထူးရခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် နှစ်ဦးသား စိတ်လိုလက်ရာဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ ညနေခင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် စိတ်ထဲ စနိုးစနှောင့်ဖြစ်စရာအတွေးလေးတွေကို အိမ်လည်းရောက်ရော ပြန်တွေးမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒါက ပထမဆုံးအကြိမ် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမဟုတ်လား? ပြီးတော့ လူတိုင်းလိုလိုသိပါတယ် ပထမဆုံးအကြိမ်ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုမှာ လိင်ဆက်ဆံ လေ့မရှိကြဘူးဆိုတာကိုလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? အဲ့ဒါကြောင့် ကျနော်တို့တွေ အချိန်မတန်သေးဘဲ ခရီးအတော်လွန်ခဲ့ပြီလားလို့ပါ။ မနက်ဖြန် မနက်တော့ သူ့ကို ကျနော်ဖုန်းခေါ်ဖြစ်မှာပါ။ ဘာတွေကို ဘယ်လိုစကားစပြောရမယ်မှန်းမသိပါဘူး။ နည်းနည်းတော့ အိုးတိုးအမ်းတမ်းဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။ အဲ့သလိုမဖြစ်ဘူးလို့တော့ ကျနော်မျှော်လင့်ပါတယ်လေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော် ဘိုဘို့ကို တကယ်ကြိုက်နေမိ လို့ပါ။ ဆိုလိုတာကဗျာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုကို ဒီလောက်လေးနဲ့အဆုံးသတ်မသွားချင်ဘူးလေ။ ကျနော့်အတွက် တော့ အခုမှ စတင်တယ်လို့ခံစားမိရတာပါ။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေဘက် ခရီးလွန်ခဲ့တယ်လို့ မမျှော်လင့်ချင်မိသလို အခုအခြေအနေထက် တိုးတက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ရယူချင်မိတယ်။
အို…ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ တစ်ခုပြောချင်တာက ကျနော်ကြုံဖူးသမျှ အတွေ့အကြုံတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံး ပထမ date လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လေဗျာ….ခင်ဗျားတွေ့ကြုံဖူးတဲ့ ပထမဆုံးချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုအတွေ့အကြုံထက် ကျနော်က ပိုသာခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။
Alex Aung (13 December 2015)
Posted by Alex Aung at 4:31 PM
နံနက် ၁၀နာရီ ၃၀မိနစ်တိတိတွင် နှိုးစက်မြည်သံ တိတ်သွားပြီ။ ပုံမှန်ဆိုရင် နှိုးစက်သံကို ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခု မြည်ချင်သလိုမြည် ...
ညနေတစ်ပိုင်းလုံး ၀ါးလုံးထိုးရွာနေတဲ့မိုးက တိကနဲ့ရပ်သွားတော့ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာလည်း ထိတ်ကနဲပျော်သွားတယ်။ ဘုရားစင်အောက်နားမှာကပ်ထားတဲ့ တိုင်က...
➳ လိင်စိတ်သဘာဝကွဲပြားသူတွေ နှင့် မြန်မာ့လူမှုအဖွဲ့အစည်း ➳
ဒီတပတ် မြန်မာ့မျက်မှောက်ရေးရာ အစီအစဉ်မှာ LGBT လို့ခေါ်တဲ့ လိင်စိတ်သဘောသဘာဝ ကွဲပြားသူတွေကို အစဉ်အလာအားဖြင့် မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းက ခွဲခြားဆ...
Christmas onaStick